ဟိုးအရင်တုန်းက ဟိုင်းကြီးမှာ အလယ်တန်းကျောင်း အထိပဲရှိတယ်။ အထက်တန်းကျောင်း တက်ချင်ရင် ဟိုင်းကြီးကနေ နေ့ တဝက်လောက် သင်္ဘောစီးရတဲ့ ပြင်ခရိုင်မှာ ဘော်ဒါနေပြီး တက်ရတယ်။ မကြီး ၉ တန်းရောက်တော့ ဟိုင်းကြီးကျောင်းခွဲမှာ ထားမလား၊ ပြင်ခရိုင်မှာ ထားမလားနဲ့နောက်ဆုံးတော့ ပုသိမ်မှာ သွားထားဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ရွာမှာ အထက်တန်းကျောင်း ရတော့မဲ့ဟာကို ပုသိမ်မှာ သွားထားတယ်ဆိုပြီး အဖေ့ကို ပြောကြပေမဲ့ အဖေ့တွက်ကိန်း မှန်သွားတယ်။ အဲဒီနှစ်က ဟိုင်းကြီးမှာ အထက်တန်းကျောင်းခွဲ မရတော့ ဟိုင်းကြီးမှာတက်ဖို့ စောင့်နေသူတွေ တစ်နှစ်အောက်တယ်။ ဟိုင်းကြီးကနေ ပုသိမ်မှာ ကျောင်းသွားတက်တာ မကြီးတို့ က ပထမဆုံးအသုတ်ဖြစ်ပြီး ဆယ်တန်းကို တစ်နှစ်တည်းအောင် ဂုဏ်ထူးတွေလည်းပါတော့ အဲဒီကတည်းကစလို့ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့ ဟိုင်းကြီးသားတွေဟာ ကလေးတွေကို မြို့ မှာ ကျောင်းသွားထားကြတာ ခုဆို ထုံးစံဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်မ ပုသိမ်မှာ ၈ တန်းတက်တော့ နေတဲ့အိမ်က ကန်လမ်းက ဘွားကြည်တို့အိမ်ပါ။
ဟိုင်းကြီးက အသိအစ်ကုိုတစ်ယောက် ထမင်းလခပေးနေတာက သမ္မတရပ်ကွက်က တင့်တင့်၊ သောင်းသောင်းတို့ အိမ်။ တင့်တင့်၊ သောင်းသောင်းလို့ခေါ်ကြပေမဲ့ အသက် ၆၀ ကျော် အပျိုကြီး အဘွားကြီးတွေ။ မိန်းကလေးဆို တာဝန်ကြီးလို့သောင်းသောင်းတို့ က ယောက်ျားလေးတွေပဲ လက်ခံပြီး မိန်းကလေးတွေဆို ကန်လမ်းအိမ်ကို ပို့ တယ်။ ကန်လမ်းက အိမ်တခြမ်းမှာ ဆရာမ၊ ဘွားကြည်တို့ နေပြီး ကျွန်မနဲ့မခင်မာအေးက ထမင်းလခပေး နေတယ်။ ဘွားကြည်က ချက်ပြုတ်ကျွှေး ဆရာမက အရင်တုန်းက ထ၂ မှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်ခဲ့ပြီး ခုတော့ တောင်ပေါ်ကျောင်းလို့ခေါ်ကြတဲ့ စစ်တပ်ကျောင်းမှာ တာဝန်ကျနေတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာအသင်ကောင်းလို့ ဝိုင်းတွေ၊ ကျူရှင်တွေဆိုတာ နားတောင်မနားရဘူး။ အိမ်တဖက်ခြမ်းမှာ အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ အန်တီဆွေ နေတယ်။ ဆရာမနဲ့အန်တီဆွေက အပျိုကြီးတွေ။ ဘွားကြည်၊ အန်တီဆွေအမေ၊ သောင်းသောင်း၊ တင့်တင့်တို့ က ညီအစ်မတွေ။ သူတို့ ညီအစ်မတွေရဲ့အငယ်ဆုံးမောင်လေးက ရန်ကုန်မှာ နေတယ်။
အဲဒီမောင်လေးရဲ့ဆုံးသွားတဲ့ ပထမဇနီးကမွေးတဲ့ ကိုကြီးအောင်ကို သူတို့ ညီအစ်မတွေ မိတဆိုးလေးဆိုပြီး သိပ်ချစ်ကြတယ်။ ဆယ်တန်းကျတဲ့ ကိုကြီးအောင် သိပ်မကျပ်ဘူးဆိုတဲ့ မော်ကျွှန်းမှာ ဆယ်တန်းသွားဖြေတာ ဆယ်တန်းတော့ မအောင်ဘူး မိန်းမရပြီး ပြန်လာတယ်။ ဆယ်တန်းမအောင်သေးဘဲ မိန်းမယူပြီး ပြန်လာတော့ အဘွားကြီးတွေပဲ ကြည့်ရှုရတာပေါ့။ မကြာပါဘူး ကိုကြီးအောင်မိန်းမ မဇာ ကိုယ်ဝန်ရှိတော့ အလုပ်ကဖြင့် မရှိသေးဘူး ကလေးယူတယ် ဘယ်ပိုက်ဆံနဲ့ကျွှေးမှာတုန်း ဘာတုန်း ညာတုန်းနဲ့အဘွားကြီးတွေ၊ အဒေါ်အပျိုကြီးတွေ ဝိုင်းဆူကြတာပေါ့။ အဖေ ကုန်ကားထောင်တော့ ကိုကြီးအောင်က စပယ်ယာလိုက်တယ်။ ကလေးတစ်နှစ်ခွဲမှာ နောက်တစ်ဗိုက်ရှိပြန်တော့ တစ်ဗိုက်ပြီးတစ်ဗိုက် မွေးရအောင် ညည်းတို့ က ကျွှေးနိုင်လို့ လား ဘာလားနဲ့အဘွားကြီးတွေဆိုတာ မဇာကို ဆူလိုက်ပူလိုက်ကြတာ။ အဲဒီတုန်းက ဒီအဘွားကြီးတွေ သိပ်ခက်တာပဲနော် သူကျွှေးနိုင်လို့သူ့ ဗိုက်နဲ့ သူ မွေးတာကို သူတို့ က ကြားကနေ ဖြစ်နေလိုက်ကြတာလို့တွေးမိတာ ခုတော့ ကျွန်မတို့ ညီအစ်မတွေလည်း အဲဒီအဘွားကြီး ညီအစ်မတွေလို ဖြစ်နေတယ်။
စန်းထွန်းရေ နင်တော့ မကြာခင် အန်တီ ဖြစ်တော့မယ် ဟေ ဟုတ်လား ဝမ်းသာစရာပဲ နေပါဦး ဘယ်သူမွေးမှာတုန်း မောင်မောင်လား၊ မကြီးလား။ မောင်မောင်မွေးမှာ ယောက်ျားလေးတဲ့။ အမ်မလေး မျောက်လောင်းတစ်ကောင်တော့ လာပြန်ပြီဟေ့။ နေပါဦး ယောက်ျားလေးမှန်း ဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲ။ အာထရာဆောင်း ရိုက်ကြည့်တာလေ။ အာထရာဆောင်းရိုက်တာ မွေးခါနီးမှ ရိုက်လို့ ရတာ မဟုတ်ဘူးလား။ ၆ လနဲ့ရိုက်လို့ ရတယ်။ ဟင် ၆ လ တောင် ရှိနေပြီ ဘယ်တုန်းက ကလေးရတာလဲ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လို့ လည်း မကြားလိုက်ပါလား။ နေပါဦး သူတို့ မင်္ဂလာဆောင်တာ မကြာသေးဘူး မဟုတ်လား။ ၇ လလောက်ရှိပြီ ယူပြီးပြီးချင်း ကလေးယူတာနေမှာ။ ကလေးချက်ချင်း မယူနဲ့ ဦးလို့မပြောလိုက်ရဘူး။ မောင်မောင်မိန်းမက သိမှာပါလေဆိုပြီး မပြောလိုက်တာ။ အမ်မလေး အဲ့ဟာမလေးက ဘာသိလို့ လဲ ယောကျာ်းစောစောယူ၊ ကလေးချက်ချင်း မွေးတတ်ဖို့ ပဲ သိတယ်။ ကလေး တစ်ယောက်မွေးဖို့၁၀ သိန်းတဲ့ ဘယ်မှာလဲ ပိုက်ဆံ။ ငါ့လို အလုပ်နဲ့ အကိုင်နဲ့ တောင် ကလေးချက်ချင်းယူဖို့သတ္တိမရှိပါဘူး ဒင်းတို့ က တော်တော်သတ္တိကောင်း။
တစ်နှစ်လောက် အေးအေးဆေးဆေး နေပါဦးလား ကလေးစရိတ်က ကြီးပါဘိနဲ့နည်းနည်းပါးပါး စုပါဆောင်းပါဦးလား။ ကလေးမွေးရင် အိပ်ကောင်းခြင်း မအ်ိပ်ရ၊ စားကောင်းခြင်း မစားရနဲ့တစ်နှစ်လောက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေကြပါဦးလား။ အသက်ကြီးလို့ကလေးချက်ချင်း ယူတာက ထားပါတော့ သူတို့ က ငယ်ငယ်လေးတွေပဲ ရှိသေးတဲ့ဟာကို။ အေးလေ သူတို့ က မွေးရုံမွေးပြီး ယောက္ခမတွေ၊ မိဘတွေ ကြည့်လိမ့်မယ်လို့တွေးသလား မသိဘူး။ သားဆက် ဘယ်လိုခြားရမလဲ ဆိုတာကိုရော အဲ့ဟာမလေး သိလို့ လား တော်ကြာ မဇာလို အပြင်မှာ တစ်နှစ်ခွဲ နောက်တစ်ဗိုက် တဗိုက်ပြီးတဗိုက် တပြွှတ်ပြွှတ် မွှေးနေဦးမယ်။ ကလေး ဘယ်နှစ်ယောက်၊ ဘယ်လောက်ခြားပြီး ယူမယ်ဆိုတဲ့ ပလမ်လည်း ရှိမယ်မထင်။ မောင်မောင့်ကို မေးကြည့်တယ် ကလေးချက်ချင်း ယူမယ်ဆိုပြီး ယူလိုက်တာလား တားတဲ့ကြားက ရတာလားလို့ မေးတော့ နောက်လည်း ယူမှာပဲ၊ အသက်လည်း ငယ်တော့တာမှ မဟုတ်တာတဲ့။ အဲဒီကောင်လား ဘာပလမ်မှ ရှိမယ်မထင်ဘူး။ မင်္ဂလာလည်း အဖေဆောင်ပေး ယူပြီးတော့လည်း ယောက္ခမအိမ်တက်နေတာ အဆင်သင့်။ ခု ကလေးလည်း ယောက္ခမ၊ မိဘတွေ ကြည့်လိမ့်မယ်လို့နေမှာ။ မောင်မောင်က မသိတတ်တောင် အဲ့ဟာမလေးက တစ်နှစ်လောက် နေဦးမယ်လို့စိတ်ကူးမရှိဘူးလား။
အယ်မလေး အဲ့ဟာမလေး ဘာသိမတုန်း ယောက်ျားနားကပ်နေဖို့ ပဲသိတာ (ဟင် သူကျ ယောကျာ်းနား မကပ်တာ ကျနေ) ။ ငါက အဲ့ဟာမလေးကို တော်မယ်ထင်တာ နင်တို့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကတဲ့။ အယ်မလေး ငါတို့ကွန်ပျူတာဆိုလို့အထင်မကြီးနဲ့ တော့ရေ။ ကိုယ်တွေလက်ထက်တုန်းက ငါးဘာသာခေတ်မှာ ၃၇၀ ရမှ ကွန်ပျူတာ ဝင်ခွင့်ရတာ။ မိန်းကလေးက ယောကျာ်းလေးထက် အမှတ်ပိုမြှင့်သေးတယ်။ ဒီတော့ ဆေးပြုတ်တွေမှ ကွန်ပျူတာ ဝင်တာ။ ငါတို့ ဆရာတွေ ခေတ်တုန်းကဆို ကွန်ပျူတာက ဆေးထက် အမှတ်ပိုမြှင့်တယ်တဲ့။ ခုခေတ်က ခြောက်ဘာသာခေတ်ကို ၃၇၀ နဲ့ဝင်တာ ငါတို့ လောက် မတော်ဘူးအေ့။ အေးလေး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပျူတာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ တော်မှာပေါ့။ ဘွဲ့ က နှမြောစရာကြီး နည်းနည်းလေး ကြိုးစားပြီး နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းသွားတက်ဖို့လုပ်ပါလား။ အမ်မလေး နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်ဖို့ ဆိုတာ စာတော်ရုံနဲ့ မရဘူး မိဘကလည်း ထောက်ပံ့နိုင်မှ ကိုယ်တိုင်ကလည်း နိုင်ငံခြားမှာ တစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်ဖို့သတ္တိရှိမှ။ ငါ ပြောတော့ သင်တန်းတွေ အများကြီး ပြန်တက်ရမှာတဲ့။
ဟဲ့ သူများကို နိုင်ငံခြားကျောင်း တက်ခိုင်းနေ ကိုယ့်မောင်ကျတော့ နိုင်ငံခြားကျောင်းမပြောနဲ့မြန်မာပြည်က သင်တန်းတောင် သွားတက်လို့ လား သင်တန်းကြေးသွင်းပြီး တစ်ရက်ပဲ သွားတက်တယ်မလား။ ဆယ်တန်းအောင်တာ လေးနှစ်ရှိပြီ ပထမနှစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ စာလည်းမသင်ဘူး ပျင်းစရာကြီး အဝေးကြီး ကားစီးရတာ ပင်ပန်းတယ်ဆိုပြီး ကျောင်းသွားမတက်ဘူး။ နောက် အဝေးသင်ပြောင်း၊ ဘာသာပြောင်းနဲ့အဝေးသင် စာမေးပွဲတွေဖြေတာ မသိလိုက်ဘူးတဲ့။ ဆယ်တန်းအောင်တာ ဆယ်နှစ်ရှိတော့ ခုထိ ဘွဲ့ မရသေးဘူး။ ဘွဲ့ ဆိုတာ သုံးစားလို့ မရဘူး ဒါပေမဲ့ လူတိုင်း အလွယ်တကူ ရတဲ့ဘွဲ့ ကိုတောင် မရဘူးဆိုတော့ အသုံးမကျလိုက်တာ သူ့ ဟာက မလွန်လွန်းဘူးလား။ အဖေက ဒီတစ်ခါစာမေးပွဲပြီးရင် ဘွဲ့ ဝတ်စုံနဲ့ဓာတ်ပုံသွားရိုက်မလို့တွေးနေတာ ကျတယ်တဲ့။ ငါ့မှာ သားသမီးသုံးယောက်ရှိတာ အတူတူ ပညာသင်ပေးရဲ့ သားနဲ့ သမီးနှစ်ယောက်က ပညာအမွေတွေယူ နင်တစ်ယောက်တည်း အသုံးမကျဘူးလို့အမေက ပြောတတ်တယ်။ အဖေက သူ့ သားက သူများတွေလို အရက်၊ ဆေးလိပ်မသောက်၊ မူးရူးနေတာ မဟုတ်တာကိုဘံ အတော်ကြီးဟုတ်လှပြီလုို့မြင်တယ်။ အမေက အမြင်မှန်တယ် သူ့ သားဆိုပြီး အကောင်းမပြောဘူး။
အဲ့ဟာမလေး မတော်လို့ သာ အမေ့သားကို ယူတာပေါ့ တော်တဲ့သူဆို အမေ့သားကို ယူမလား။ အမေက ဟုတ်ပါ့ ငါ့သားကများ မသိတတ်လို့သူ့ မိန်းမက သိတတ်မယ်ထင်တာ ထူးမခြားနားပါလား။ အသွင်တူလို့အိမ်သူဖြစ်တာ အမေ့ရေ။ ကန်စွန်းရွက်ကြော်တာလည်း မည်းနေအောင် ကြော်တယ်တဲ့။ သူ့ အမေက အိမ်ရှင်မ အရမ်းပီသတာဆို သူ့ သမီးကျတော့ ချာလှချည်လား။ (အင်း ငါ့ကို ကန်စွန်းရွက် ကြော်ခိုင်းရင် အဲဒီလို မည်းနေမှာ အဲဒီအခါ ငါ့ယောက္ခမ၊ ယောက်မတွေက ငါ့ကို ဒီလိုပဲ အတင်းဆိုကြမလားမသိ။ အင်း ယောက္ခမအိမ် လိုက်မနေမှဖြစ်မယ်)။ မောင်မောင် ခု ဝလာလိုက်တာ မျက်နှာဖောင်းဖောင်း မေးစေ့နှစ်ထပ်နဲ့မသိရင် သူက အစ်ကိုအကြီးဆုံးလို့ထင်ရမယ်။ ငါက ညစာလျှော့စား လေ့ကျင့်ခိုင်းလုပ်ခိုင်းရင် အင်းပါ အင်းပါနဲ့လုပ်မဲ့ပုံလည်း မပေါ်ပါဘူး။ ဒီကောင် ငပျင်း အားရင် အိပ်နေတဲ့ကောင် ဘာမှာလုပ်လိမ့်မတုန်း။ သူ့ မိန်းမကလည်း အစားလျှော့စားဖို့ ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခိုင်းရမှန်း သိမယ်မထင်ဘူး။ အိမ်ထောင်ကျပြီးရင် ယောက်ျားလေးတွေက လှစရာမလိုတော့ပြီး ပစ်စလက်ခတ်နေကြတာ မိန်းမဖြစ်သူက တိုက်တွန်းပေးဖို့ လိုတယ်။ အဲ့ဟာမလေးလား အစွမ်းအစမရှိ မထက်မြက် ယောက်ျားကို ကြောက်နေရတာ။
သူများတွေမှာ ယောကျာ်းရရင် ယောက်ျားအိမ်လိုက်နေကြတယ် ငါတို့ အိမ်မှာတော့ ယောကျာ်းလေးက မိန်းမအိမ်နောက် လိုက်နေတော့တာပဲ။ မောင်မောင့်ဆို မယားနောက် ကောက်ကောက်ပါသွားတာ ယောက္ခမကလည်း သူ့ ကို ချစ်တယ်တဲ့။ မချစ်ဘဲနေပါ့မလား ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျနဲ့ ပြီးတော့မှသာ အလုပ်ကို လက်ကြောတင်းအောင် မလုပ်တဲ့ ငပျင်း ပျော့စိစိနဲ့ နံတဲ့ ကြောင်ချေး။ အိမ်မှာသာ မလုပ်သာ ယောက္ခမအိမ်မှာတော့ လုပ်မှာပေါ့။ အဖေကလည်း သူ့ ချွှေးမကို ချစ်လိုက်တာ ဖုန်းဆက်ရတာနဲ့ဟိုကလည်း ဘဘ ဘဘနဲ့ဟွန်း... အမြင်ကပ်တယ်။ ဟွန်း.. ချွှေးမကို သိပ်ချစ်မနေနဲ့ချွှေးမက သမီးတွေလောက် မကောင်းဘူးလို့အမေက ကြိမ်းထားတယ်တဲ့။ အင်္ကျီကလည်း လည်ပင်းအစေ့ ဝတ်ထားလိုက်တာ ဟိုဟာမစား ဒီဟာမစားနဲ့ရှုနာရှိုက်ကုန်းလေး မျက်နှာလေးကတော့ လှပါရဲ့ ။ ရန်ကုန်မှာမွေး ရန်ကုန်မှာကြီးပြီး မြို့ ထဲကို မသွားတတ်ဘူးတဲ့ အံ့ရော အံ့ရော အဲဒါကို ဂုဏ်ယူနေသေးတယ်။ အေးလေ အဲဒါ ရိုးတာမှ မဟုတ်တာ တုံးတာ ခြေတလှမ်းကုဋေတစ်သန်း လှမ်းနေလို့ဖြစ်မလား ဒီခေတ်ကြီးမှာ။ မိန်းကလေးကလည်း ထက်ထက်မြက်မြက် ယောက်ျားနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရမှာ။
မောင်မောင် သင်္ဘောသားသင်တန်းတက်တာ ပိုက်ဆံတွေဆိုတာ ကုန်လိုက်တာ ပြီးတော့ သင်္ဘောမတက်ဖြစ်။ ခုတော့ ပွဲရုံမှာလိုလို ၊ ကားမောင်းသလိုလို ဟုိုယောင်ယောင်၊ ဒီယောင်ယောင်။ သူ့ ယောက္ခမအိမ်က မပြည့်စုံတော့ ပန်းကန်ခွက်ယောက် အကောင်းစား မဟုတ်တာတွေမြင်တော့ မကြီးက အကောင်းကြိုက်တဲ့ မောင်မောင့်ကို သနားလို့ တဲ့။ ကျွန်မတို့ အိမ်မှာက အဖေက ဟင်းကောင်းကြိုက်တော့ အစားအသောက်က အလျှံပယ် သူ့ ယောက္ခမက ချွှေတာတဲ့သူတွေဆိုတော့ သူ့ ယောက္ခမအိမ်မှာ ဟင်းကောင်းမစားရဘူး ထင်တယ်။ အိမ်ကိုရောက်ရင် အသားကုန် တီးတော့တာပါတဲ့ ဒီကောင်က ဟင်းစားကကြီး အကောင်းလည်း သိပါ့ ။ ကျွန်မကတော့ မသနားပါဘူး သူ့ ဘဝနဲ့ သူပဲ။ အမေက ဒီကောင် ခုချိန်မှာတော့ ကျောက်ခဲကိုက်ရတောင် ပျော်နေမဲ့ အချိန်တဲ့။ ဗိုက်က ဘယ်တော့မွေးမှာတုန်း နောက်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီ။ ကျွန်မ ဘွဲ့ ယူဖို့အဖေတို့ က နောက်နှစ်လယ်လောက် လာဖို့ မှန်းထားတာဆိုတော့ ကလေးမွေးပြီးမှပေါ့။ ဟွန်း ...ယူအက်စ်မှာ တစ်လပဲ နေမယ်နော် မြေးကလေးကို လွမ်းလို့ပြန်မယ်လုပ်လို့မရဘူးနော်။
ဘာလိုလိုနဲ့ဆိုးပေလေး မွေးလို့ကျွန်မတို့ ရဲ့ဆိုးပေကြီးမောင်မောင်လည်း ကလေးအဖေ ဖြစ်တော့မှာပါလား။ သူ့ အလှည့်တုန်းကဖြင့် စာကောင်းကောင်း မသင်ဘဲနဲ့သူ့ သားအလှည့်ကျမှ နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းထားချင်တယ် ဆိုလို့ ကတော့ ဟွန်း...တကတည်း ပြောထည့်လိုက်မယ်။ ကျောင်းကောင်းကောင်း ထားနိုင်မှ ပညာကောင်းကောင်းတတ်မှာ ပညာတတ်မှ လစာကောင်းမှာ။ ခုခေတ်က ပညာကို ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ပြီး သင်ရတာ ပိုက်ဆံမရှိရင် ပညာမတတ်ဘူး။ ကလေးကို ကျောင်းကောင်းကောင်း ထားနိုင်မှ အင်း...ဒီလောက်တောင် တွေးပါ့မလား။ လစာနည်းလို့ တဲ့ ငါ့ကို ညည်းပြနေတာ ငါ့တို့ လို လစာကောင်းချင်ရင် ငါတို့ လို အပင်ပန်းခံ၊ ဒုက္ခခံပြီး စာသင်ပါလားလို ပြောပစ်လိုက်တယ် နောက်ဆို ငါ့ရှေ့လစာနည်းတယ်လို့မညည်းရဲတော့ဘူး။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ယောကျာ်းယူ ကလေးတွေ တပြွှတ်ပြွှတ် မွှေးနေတဲ့ ဟာမတွေကို အမြင်ကပ်တယ်။ ယောကျာ်းယူပြီး ယောကျာ်းလုပ်စာကို ထိုင်စားနေလို့ဖြစ်မလား နည်းနည်းပါးပါး ကြိုးစားပါဦးလား အေးလေ။ ဝိုင်းကို အဲဒီအကြောင်း ပြောပြတော့ သူတို့ မိသားစုမှာလည်း အဲဒီလိုပဲတဲ့။
သူ့ အဘိုးက ပထမဇနီးနဲ့ကလေး လေးယောက်မှာ ဝိုင်းအဖေက အကြီးဆုံး၊ ဒုတိယဇနီးနဲ့ကလေး ခြောက်ယောက်၊ မောင်နှမ ဆယ်ယောက်ကနေ မွေးလာမဲ့ ကလေးတွေ၊ ဝမ်းကွဲတွေနဲ့သူ့ ဆွေမျိုးတွေက ပိုပြီးဇယားရှုပ်တယ်။ သူ့ မောင်ဝမ်းကွဲတစ်ယောက် ရုပ်ဆိုးဆိုးမိန်းမယူတာ တမျိုးလုံးက ကဲ့ရဲ့ ကြတယ်ဆိုပဲ။ အရမ်းအေး၊ ဖေးမပြောပေးမဲ့ ဝိုင်း နိုင်ငံခြားရောက်နေတာ ကံဆိုးတာပဲလို့ပြောကြတယ်။ အင်း အေးရှန်းတွေက လူမျိုးသာကွဲတာ ဓလေ့ထုံးစံတွေက အတူတူပါလားနော်။ နင်တို့ က နင်တို့ မောင် အသုံးမကျသေးဘူးဆိုတာ သိသေးတယ်။ တချို့ တွေများဆို သူတို့ သား အသုံးမကျတာကို မမြင်ဘူး ချွှေးမကိုပဲ အပြစ်ပြောနေတာ။ နင်တို့ က ထက်မြက်တော့ မထက်တဲ့ယောက်မကို အားမလို အားမရ ဖြစ်နေတာပေါ့။ နင်တို့ မိသားစုတွင်းသာ စကားတင်းဆိုကြတာ အပြင်မှာတော့ ဝတ္တရားအတိုင်း ပြောဆိုဆက်ဆံ ပေးကမ်းသေးတယ် မဟုတ်လား အင်း။ အဲဒီကလေးက နှစ်ဖက်မိသားစုရဲ့မြေးဦးဆိုတော့ သည်းသည်းလှုပ် ချစ်ကြမှာ။ မကြီးက ပထမဆုံးမြေးဦး မွေးချင်လို့ တဲ့ မောင်မောင် ဦးသွားပြီး။ အရင်တုန်းက အကြီးဆုံး အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ နင်အိမ်ထောင်ပြုရမယ်လို့ကျွန်မတို့ တွေ တားလို့ရပေမဲ့ မကြီးမွေးပြီးမှ နင်မွေးရမယ်လို့တားလို့ မှ မရတာ။
သူများတွေက ကလေးဆိုရင် သားဦးယောကျာ်းလေး လိုချင်ကြတယ်။ ကျွန်မတို့မိသားစုကတော့ မျောက်မူးလဲအောင် ကဲလွန်း၊ ကျွန်မတို့ညီအစ်မတွေ ဆယ်တန်းအောင်သွားတာ အိမ်က မသိလိုက်ဘူး၊ မောင်မောင် ဆယ်တန်အောင်ဖို့တအိမ်လုံး ဆူညံပွက်လောရိုက်၊ ကျွန်မတို့ တွေလောက် မကြိုးစား မထက်မြက် အသုံးမကျတဲ့ ယောကျာ်းလေးဒဏ် ခံဖူးတော့ ယောကျာ်လေးထက် မိန်းကလေး ပိုလိုချင်တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မောင်မောင့်ကလေးက ယောကျာ်းလေးဆိုတော့ မျောက်မူးလဲတစ်ကောင် လာပြန်ပြီဟေ့လို့ကျွန်မ ကြွေးကြော်တာပေါ့။ သူတို့ တွေ ဘာလို့မြေးဦးလိုချင်ကြလဲ မသိဘူး။ ကျွန်မက အလတ်မို့ အကြီးဆုံး၊ အငယ်ဆုံး ဖြစ်ချင်လိုက်တာလို့မရှိဘူး။ အချစ်တွေ အကုန်လုံးရတဲ့၊ မိဘအချစ်တွေကို မောင်နှမတွေနဲ့ခွဲဝေစရာမလိုတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ကလေးလည်း မဖြစ်ချင်ဘူး။ ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ကလေးတွေ မြင်ဖူးသလို တအိမ်တည်း အတူတူနေပေမဲ့ ချစ်ဖို့ မကောင်းလို့ချစ်မလာတဲ့ ကလေးလည်း မြင်ဖူးတယ်။ မြေးဦးမှ မဟုတ်ပါဘူး ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ကလေးဆို ချစ်ကြမှာပါပဲ။
မမြင်ရသေးတော့ စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှ ထူးထူးခြားခြား မနေပေမဲ့ မြင်ရင်တော့ ချစ်မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်မတို့မောင်နှမတွေက ဝမ်းကွဲတွေနဲ့သိပ်မရင်းနှီး မချစ်ကြဘဲ မောင်နှမတွေကတော့ ချစ်ကြတယ်။ မေမေ့မောင် ကျွန်မတို့ ဦးလေး မင်းချေ (မေမေ့ညီမတွေက ရခိုင်လို မောင်းချေ (အစ်ကို) လို့ခေါ်တာကို ကျွန်မတို့ တွေက လိုက်ခေါ်ရင်း မင်းချေ ဖြစ်သွားတယ်) သား သန်းဇော်ကို၊ ရန်ကုန်မှာ အိမ်နီးနားချင်း အမေ့တို့ ရွာက ရပ်ဆွေရပ်မျိုး ဘိုးလေးရဲ့ သား မောင်ကြည်အောင်၊ မေမေ့ညီမနဲ့အဖေ့ညီဝမ်းကွဲရဲ့သမီး ကျွန်မညီမဝမ်းကွဲ ပိုပို၊ မေဇင်ထွန်း၊ ဘေးအိမ်က အကြင်နာတို့ ကို ချစ်ကြတာပဲ။ ကျွန်မတို့မိသားစုက ကလေး၊ ခွေး၊ ကြောင် တော်တော်ချစ်ကြတယ်။ ကျွန်မအိမ်ရှင်ရဲ့ကြောင်မိုချီနဲ့ခွေးနတ်စုကိုလည်း ဓာတ်ပုံကနေတဆင့် ချစ်နေကြတယ်။ မောင်မောင့်သားကိုလည်း ချစ်ကြမှာပါပဲ။ အရင်ပို့ စ်တွေတုန်းက မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးက မောင်မောင် ခုပို့ စ်မှာတော့ ဆိုးပေကြီးတွေက တခြားသူ ဟုတ်ရိုးလား... ကျွန်မတို့ညီအစ်မတွေပေါ့။
နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၄။
(ပင်စယ်ဗေးနီးယားနဲ့နယူးဂျာဆီပြည်နယ်တွေကို ကျေးဇူးတော်နေ့ ရုံးပိတ်ရက် ခရီးထွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ ပြန်လာရင် တောလားတွေ ရေးတင်ပါဦးမယ်။ Happy Thanksgiving ! Happy Holidays ! )
အောက်တိုဘာလမှာ ဖေးဘရိတ်ဖြစ်တဲ့ အရာတွေကို ဝတ်ဆင်ပြီး အောက်တိုဘာလမှာ မဟုတ်ဘဲ နိုဝင်ဘာလရဲ့ဒုတိယပတ် လွန်ခဲ့တဲ့ စနေနေ့ ကမှ ဘရွတ်ကလင်း ဘော်တနစ်ကယ်ဂါးဒင်းမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးပါ။ ဦးထုပ်တွေကို နှစ်သက်သူတစ်ယောက်အတွက် ဒီနှစ်ဆောင်းတွင်းမှာ ဖေးဘရိတ်ဖြစ်နေတဲ့ ဦးထုပ်လေးက မကြာသေးခင်ကမှ ဝယ်လိုက်တဲ့ Wool Beret နံပြားဦးထုပ်လေးပါ။ ဆောင်းတွင်းဆို ကုတ်အင်္ကျီကလည်း အနက်၊ ဘောင်းဘီကလည်း အနက်၊ ဖိနပ်ကလည်း အနက်၊ လက်အိတ်နဲ့မာဖလာကလည်း အနက် တကိုယ်လုံး နက်နေတာများ မျက်နှာလေး ကွက်လင်းနေလို့ သာ တော်တော့တယ်။ ဒါကြောင့် နောက်များ ဦးထုပ်၊ မာဖလာဝယ်မယ်ဆိုရင် အရောင်တောက်တောက် ဝယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ ဦးထုပ်မှာ ထွင်းထားတဲ့စာလုံးက နာမည်အတိုကောက်လားလို့မေးကြတယ်။ အမှန်က Ralph Lauren အတိုကောက် RL လို့ရေးထားတာပါ။
JCrew ၊ Tiffany တို့ ရဲ့တချို့ ပစ္စည်းတွေက နာမည်အတိုကောက် ထွင်းပေးလို့ ရပြီး ထွင်းခ ပေးရတယ်။ Ralph Lauren တံဆိပ် ဦးထုပ်ဆိုရင် Women ဆိုဒ်ကကြီးနေလို့Children Girl7- 16 အတွက် ထုတ်တဲ့ဆိုဒ်နဲ့ မှ တော်တယ်။ အနီရောင်ရဲရဲ၊ ဦးထုပ်ဒီဇိုင်းလေးက ချစ်စရာကောင်းသလို နွေးလည်းနွေးတော့ ဆောင်းတွင်းမှာ ဖေးဘရိတ် ဖြစ်နေတဲ့ ဦးထုပ်ဆိုပါတော့။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်က ဘရွတ်ကလင်းဘော်တနစ်ကယ်ဂါးဒင်းကို ဓာတ်ပုံသွားရိုက်တာ အဲဒီနေ့ က မိုးတွေရွာ၊ ရာသီဥတုချမ်းလို့ တုန်နေတာနဲ့၁ နာရီမှာ စတင်တဲ့ ဘော်တနစ်ဂါးဒင်းတိုးကိုတောင် မစောင့်နိုင်တော့ဘဲ ပြန်ခဲ့တော့တယ်။ ဝိုင်းက ကိုယ့်လောက် ချမ်းပုံမရဘူး။ ကိုယ် ချမ်းနေတာတွေ့ တော့ အနွေးထည်အကြောင်း၊ အင်္ကျီအကြောင်းပြောကြရင်း Cashmere ကက်ရ်ှမီးယားအကြောင်း ရောက်သွားတယ်။ ကက်ရ်ှမီးယားသိုးဆီကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကက်ရ်ှမီးယားအဝတ်အထည်တွေက ဈေးကြီးသလို အင်မတန်နွေးတယ်။ ရာမားဝတ်ထားတဲ့ ကက်ရ်ှမီးယားက ဈေးကြီးတယ်လို့ဆူနမ် ပြောဖူးတယ်။
ဟုတ်တယ် ဈေးချတာတောင် ၂၀၀ အောက် မလျော့ဘူး ။ ကက်ရ်ှမီးယားဝတ်ထားရင် Layer တွေ အများကြီး ဝတ်စရာ မလိုဘူး။ မင်း ဝတ်ထားတာ ဘာတုန်း wool သိုးမွှေးလေ နွှေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကက်ရ်ှမီးယားလောက် မနွေးဘူး။ ဒါနဲ့ချက်ချင်းပဲ ဈေးချနေတဲ့အထဲက Turtleneck လို့ခေါ်ကြတဲ့ လည်ထောင်ကက်ရ်ှမီးယား တစ်ထည်ဝယ်တယ်။ ကိုယ် ဝယ်ဖူးသမျှထဲမှာ အဲဒီအင်္ကျီ ဈေးအကြီးဆုံးပဲ။ ဆုပ်လိုက်ရင် လက်တဆုပ်သာသာ လက်နဲ့ ပဲလျှော်ရပြီး ချိတ်နဲ့ မလှန်းရ ။ နည်းနည်းဂရုစိုက်ရပေမဲ့ တော်တော်နွေးတယ်။ ခုလိုအေးတဲ့ရာသီ ပိတ်ရက်တွေမှာ လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်၊ တောင်သွားတက်ရင် ကက်ရ်ှမီးယားပေါ်မှာ သိုးမွှေးတစ်ထည် ဝတ်လိုက်ရုံနဲ့လုံလောက်တယ်။ ဆောင်းရာသီဆို လည်ထောင်အင်္ကျီလေးတွေကို သဘောကျတယ် မာဖလာ ပတ်စရာမလိုတော့လို့ ။ အပေါ်က နက်ပြာရောင် သိုးမွှေးအနွေးထည်က Classic Duffle Coat လေးပါ။
အစတုန်းကတော့ လည်ပင်းစိနေတယ်လေး၊ အိတ်က ကြီးတယ်လေးနဲ့နောက်တော့လည်း ကြိုက်လို့မချွှတ်တော့ဘူး။ Hood လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ခေါင်းစွပ်ပါလို့နားရွက်အေးလာရင် ခေါင်းစွပ် စွပ်လိုက်ရုံပဲ။ ခေါင်းစွပ်က ဖြုတ်တပ်လို့ ရတဲ့ အရှင်ဆို ပိုမိုက်မယ်။ ကြယ်သီးချိတ်တဲ့ ကြိုးကွင်းတွေက အမြင်ဆန်းတယ်။ အိတ်အကြီးကြီးက ဖုန်း၊ ကဒ်၊ နှုတ်ခမ်းဆီ၊ ဟမ်းခရင်၊ တစ်ရှုး တိုလိုမိုလီ အကုန်ဆံ့တယ်။ ဒီလိုချမ်းအေးတဲ့ရာသီမှာ လက်အိတ် မဆောင်ဘဲ အပြင်ထွက်လို့မရဘူး။ ကိုယ် သဘောကျတဲ့ လက်အိတ်လေးက လက်ချောင်းထိပ်နေရာလေးတွေကို လွတ်ထားတာမို့ ကင်မရာနှိပ်ဖို့ ပြုဖို့အဆင်ပြေတယ်။ ချမ်းလာရင် အဖုံးစွပ်လေးထဲ လက်ချောင်းတွေကို ထည့်လိုက်ရုံပဲ။ ဝိုင်းကတော့ လက်အိတ်ကို ချွှတ်ရင်လည်း အကုန်ချွှတ် လက်မှာ ဘာမှရှိမနေတဲ့ ရိုးရိုးလက်အိတ်ကိုပဲ နှစ်သက်ပါသတဲ့။Swiss Gear ၊ Samsonite တို့ နဲ့ ယှဉ်ရင် ပေါ့ပါးတဲ့ ဂျာမန် deuter တံဆိပ် Nomi ကျောပိုးအိတ် အစိမ်းရောင်လေးက ရုံးတက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တောင်သွားတက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကျောထက်မှာ အမြဲပိုးထားတဲ့ အိတ်ကလေးပါ။
ဒီလိုချမ်းအေးတဲ့ရာသီမှာ ရေနွေးပူပူလေးတစ်ခွက် မှုတ်သောက်ရလောက် နွေးထွေးစေတာ မရှိဘူး။ အဖုံးဖွင့်စရာ မလိုဘဲ အဖုံးကို ဖိလိုက်တာနဲ့ရေနွေးတွေ ထွက်ကျလာပြီး သောက်ပြီးရင် ခွက်ကို ဗူးပေါ်မှာ ပြန်ဖုံးလို့ ရတဲ့ နာရီအတော်ကြာအောင် နွေးနေတဲ့ IKEA Steel vaccum flask ဓာတ်ဘူးလေးက ကိုယ့် ဖေးဘရိတ်။ ဘောင်းဘီက ကိုယ့်ဖေးဘရိတ် Levis ဂျင်းနက်ပြာ ။ ကုတ်အင်္ကျီက အနက်၊ ဘောင်းဘီအနက်၊ ဖိနပ်ကအနက်၊ အားလုံးနက်နေလို့အရောင်လေးထည့်ရအောင်ဆိုပြီး ဆောင်းတွင်းဆိုဝတ်ဖို့အနီ၊ အပြာ ဘောင်းဘီတွေ ဝယ်ထားတယ်။ ဝိုင်းက ကုတ်အင်္ကျီအနက်၊ ဘောင်းဘီအနက်မှာ အရောင်အဖြစ် မာဖလာရောင်စုံပတ်တယ်။ ဟိုးအရင်အပတ်က ဘရွှတ်ကလင်း ဘော်တနစ်ကယ်ဂါးဒင်းကို သွားတုန်းက ချမ်းလို့ တုန်စေတဲ့ တရားခံက ခြေအိတ်နဲ့ဖိနပ်။ ခြေကျင်းဝတ်သာသာ ခြေအိတ်ရယ်၊ အပြေးလေးကျင့်တဲ့ဖိနပ်က အေးစိမ့်လာတာကို မတားဆီးနိုင်ဘူး။ ခြေသလုံးတဝက်ထိရောက်တဲ့ ခြေအိတ်၊ လည်ရှည်မြင်းစီးဘွတ်ဖိနပ် Riding Boot စီးထားလို့ ကတော့ အတော်လေး နွေးထွေးစေတယ်။ ဦးထုပ်၊ ဖိနပ်၊ ကက်ရှမီးယား လည်ထောင်အင်္ကျီ အနက်ရောင်က Ralph Lauren ဖြစ်ပြီး သိုးမွှေးလည်ထောင်အင်္ကျီ၊ သိုးမွှေးကုတ်၊ လက်အိတ်က JCrew ပါ။
Natural Organics အလှပြင်ပစ္စည်းတွေ ခေတ်စားလာလို့သုံးကြည့်တာ အကြိုက်တွေ့ နေတဲ့အရာတွေက l'occitane က ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ဘော်ဒီလိုးရှင်းနဲ့ဒီဗိုင်းကရင်မ်ပါ။ ကောင်းကင်အုံ့ မှိုင်းလို့မိုးလေး တဖြောက်ဖြောက် မစဲတဲ့နေ့ တွေဆိုရင် Shabu Shabu လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ဟော့ပေါ့စားရတာ ကြိုက်တယ်။နှုတ်ဆက်ပွဲ၊ မွေးနေ့ ၊ ခရီးကပြန်လာရင် ဝင်စားဖြစ်ပေမဲ့ တစ်ယောက်တည်းတော့ သွားမစားဖြစ်ဘူး။
တေလာဆွစ် သီချင်းလေးတွေ ကြိုက်ပေမဲ့ အခုအသစ်ထွက်တဲ့ 1989 သီချင်းတွေ နားမထောင်ရသေးဘူး။ ခုတလော နားထောင်ဖြစ်နေတာက ဆွီတိရဲ့အချစ်ဆိုတာ အမည်ရတဲ့ သီချင်းလေးပါ။
ရထားစီးချိန်တွေမှာ ဖတ်ဖြစ်နေတာကတော့ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရဲ့ဝထ္ထုတိုစာအုပ်လေးပါ။ ကင်နွန် 7D ကင်မရာကသာ ပရောက်ဖက်ရှင်နယ် ကိုယ်က အလွယ်ဆုံး အော်တိုဖိုးကပ်စ်နဲ့ ပဲ ရိုက်တတ်တယ်။ ကင်မရာမှာ Function တွေ ပါပေမဲ့ ဘယ်လိုသုံးရမှန်း မသိဘူးရယ်။ ခရစ်စမတ်မီးရောင်စုံနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အားခဲနေတဲ့ ဝိုင်းက သင်ပါဟလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့အပြင် ကိုယ်ကိုတိုင်ကလည်း ဘယ်လိုရိုက်ရမလဲဆိုတာ သိချင်နေတာနဲ့User Manual တွေဖတ်၊ ဗီဒီယိုတွေကြည့်၊ tutorials တွေဖတ်ပြီး လေ့လာနေတယ်။ ခရစ်စမတ်ဓာတ်ပုံတွေ ကောင်းကောင်းထွက်လာဖို့မျှော်လင့်ရတာပဲ။
အောက်တိုဘာလရဲ့ဖေးဘရိတ်အဖြစ်ဆုံးက Fall Foliage ရောင်စုံလှပနေတဲ့ သစ်ပင်တွေပါ။ အိုင်အိုဝါ၊ ကန်တက်ကီ၊ မေရီလန်းပြည်နယ်တွေထက် နယူးယောက်ရဲ့ဆောင်းဦးရာသီက ပိုလှတယ်။ ရာသီဥတုက ၀ ၊ မိုင်းနပ်စ် ၂ လောက် အေးပေမဲ့လည်း ကက်ရ်ှမီးယား၊ သိုးမွှေးအင်္ကျီတွေ အထပ်ထပ်ဝတ်၊ လည်ရှည်ဘွတ်ဖိနပ်၊ လက်အိတ်၊ ဦးထုပ် အအေးဒဏ်ကာကွယ်မဲ့ ဝတ်စုံအပြည့်နဲ့ပိတ်ရက်တွေဆို နယူးယောက်တခွင်က ဆောင်းဦးအလှကို ခံစားကြတယ်။ ဂျော့ဝါရှင်တန်တံတားကို ဖြတ်ကျော်လို့နယူးဂျာဆီပြည်နယ် ပါလာဆိုဒ်ပန်းခြံဆီ ဝိုင်လင်းအဖွဲ့ နဲ့၇.၃၇ မိုင် ဟိုက်ကင်းသွားတယ်။ အဖွဲ့ နဲ့ ဆို ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်း ရိုက်ဖို့ အချိန်မရှိဘူး။ နောက်တပတ်ကျတော့ ဝိုင်းနဲ့ကိုယ့်ဘာသာ ချီတက်ကြတယ်။ ကိုယ်တို့ က Phtography Hiking လို့ခေါ်ကြတယ်။ တကွေ့ လောက် လျှောက်လိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ကြနဲ့မနက် ၁၀ နာရီကတည်း ဖိုတိုကရပ်ဖီဟိုက်ကင်းတာ ညနေလေးနာရီခွဲမှာ ၈.၅ မိုင်ပဲ ခရီးပေါက်တယ် ။
ဘရွှတ်ကလင်း ဘော်တနစ်ကယ် ဂါးဒင်းက စနေနေ့မနက် ၁၀ နာရီကနေ ၁၂ ထိ ဝင်ကြေးအခမဲ့။ နယူးယောက်နေတဲ့ အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ပိတ်ရက်တွေဆို ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူး၊ သူငယ်ချင်း မရှိဘူးလို့ညည်းဖူးတယ်။ ကိုယ် နယူးယောက်ရောက်တော့ ဘယ်ကသာ လုပ်စရာတွေ မရှိပါ့မလဲ လုပ်စရာတွေများ များလွန်းလို့ ။ နယူးယောက်မှာမွေး နယူးယောက်မှာကြီး အဘိုးကြီးအရွယ်ဖြစ်နေတဲ့သူက ခုထက်ထိ နယူးယောက်ကို စူးစမ်းရှာဖွေလို့မကုန်သေးဘူး so much things to explore လို့ဆိုကြတယ်။ သူငယ်ချင်းမရှိလည်း meet up အဖွဲ့ တွေရှိတယ်။ စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်၊ တက်ကြွတဲ့စိတ် ရှိဖို့ သာ လိုတာ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာတုန်းက ရှန်နယ်ဒိုးဝါးတောင် သွားတက်တာ ဆူနမ်တို့ နဲ့မဟုတ်ဘူး meet up အဖွဲ့ နဲ့ ။ ဘောလိဝုရုပ်ရှင်ပိုကြိုက်တဲ့ ဆူနမ်တို့ က ပြတိုက်တွေကို စိတ်မဝင်စားတော့ နေရှင်နယ်မောလ်တဝိုက်က ပြတိုက်တွေကို ကုိုယ့်ဘာသာ တစ်ယောက်တည်း သွားတယ်။ ပိတ်ရက်တွေဆို ဘူတာကားပါကင်တွေက ဖရီး။ ဒီစီမြို့ ထဲ ရထားစီး ပြတိုက်တွေရဲ့အထပ်တိုင်း အခန်းတိုင်းကို ဝင်တယ်။
အိုင်အိုဝါနဲ့ကန်တက်ကီမှာ လုပ်စရာတွေ မရှိဘူးဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒီစီနဲ့နယူးယောက်လို မြို့ ကြီးတွေမှာတော့ လုပ်စရာမရှိဘူးဆိုတာ မမှန်ဘူး လုပ်ချင်စိတ်မရှိလို့ သာ။ နယူးယောက်သားတွေ နယူးယောက်ကနေ မခွာနိုင်ကြတာ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတာ သဘောပေါက်လာပြီ။ meet up လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ မှာ ဝိုင်းနဲ့အသိဖြစ်၊ ဝါသနာတူ၊ စရိုက်တူလို့ခရီးတွေ အတူတူသွား ပိတ်ရက်တွေဆို meet up အဖွဲ့ နဲ့လမ်းလျှောက်၊ ဟိုက်ကင်းသွားနဲ့ဝိုင်းလို စိတ်တူကိုယ်တူ ဝါသနာတူ သူငယ်ချင်းရတာ တကယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်။ ဆူနမ်တို့ နဲ့ ကျတော့ ဝါသနာမတူ၊ သူတို့ အချင်းချင်း သူတို့ ဘာသာစကားနဲ့ ပဲ ပြောကြတော့ သူတို့ အနားရှိနေရင် လုံခြုံစိတ်ချနွေးထွေးတယ်လို့ခံစားရပေမဲ့ အထီးကျန်တယ်။ ဝိုင်းနဲ့ ကျတော့ သူကလည်း အီတလီကနေ နယူးယောက်ကို ပြောင်းလာတာ သုံးလလောက်ပဲရှိသေးပြီး သူငယ်ချင်းမရှိ။ ကိုယ်ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်ကမှ နယူးယောက်ကို ပြောင်းလာတာ သူငယ်ချင်းမရှိ။ လမ်းလျှောက်၊ တောင်တက်၊ ခရီးတွေ အများကြီး သွားချင်တဲ့ ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက် အစားအသောက်လည်း အကြိုက်တူကြတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အောက်တိုဘာမှာ ဖေးဘရိတ်အဖြစ်ဆုံးက သစ်ရွှက်ရောင်စုံလေးတွေပါပဲ။ နယူးယောက်တစ်ခွင် ခြေဆန့် ကာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဆောင်းဦးအလှ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို တင်လိုက်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ဖေးဘရိတ်ကို နိုဝင်ဘာမှ ရေးဖြစ်တာ ဆောရီးနော် မြတ်ကြည်လေး။
နိုဝင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၄။
အောက်တိုဘာလမှာ သွားဖို့ ရွေးချယ်လိုက်တာကတော့ နယူးယောက်မြို့ ရဲ့မြောက်ဖက်စူးစူးမှာရှိတဲ့ ဗာမွန်ပြည်နယ်ပါ။ Fall Foliage ဆောင်းဦးရာသီ သစ်ပင်တွေ အရောင်ပြောင်းတာကို သွားကြည့်တဲ့ ခရီးစဉ်မို့စက်တင်ဘာလကုန်ခါနီးမှ စဖွင့်ပြီး အောက်တိုဘာလကုန်အထိပဲ တိုးခရီးစဉ်တွေ ရှိပါတယ်။ ဗီယက်နမ်က ဝိုင်းအစ်မနှစ်ယောက် ယူအက်စ်ကို လာလည်လို့ကယ်လီဖိုးနီးယားကို နှစ်ပတ်ခရီးသွားနေတဲ့ ဝိုင်းက အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးအပတ်မှာမှ နယူးယောက်ကို ပြန်ရောက်လာတာမို့အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့ခရီးစဉ်ကုို ရွေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မအိမ်နဲ့ နီးတဲ့ ဖလပ်ရှင်းစုရပ်ကို ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ် ရောက်ရမှာမို့၅ နာရီခွဲ အိပ်ယာကထ ၆ နာရီထိုးတာနဲ့ရထားစီးဖို့ဘူတာရုံကို ရောက်နှင့်နေရပြီ။ ဖလပ်ရှင်းကနေ မက်ဟန်တန် တရုတ်တန်းဆီကို ပြေးဆွဲတဲ့ တိုးဖယ်ရီစီးပြီး တရုတ်တန်းရောက်တော့ ၇ နာရီ ၂၀ ပဲ ရှိနေသေးတယ်။ တိုးကားက တရုတ်တန်းကနေ မနက် ၈ နာရီ ထွက်မှာပါ။
ချက်ကင်ဝင်တော့ ဒုတိယအကြိမ် ဝိုင်းနဲ့ အက်ကေဒီးယား ခရီးစဉ်ရဲ့တိုးဂိုက်က ဗာမွန်တိုးဂိုက်အဖြစ် ပြန်ဆုံတယ်။ ခုံနံပါတ်ရပြီး အတန်ကြာတော့ ဝိုင်း ရောက်လာတယ်။ တိုးဂိုက်က ဝိုင်းကို မှတ်မိတယ် မမှတ်မိပဲ နေပါ့မလား။ တိုးကားက မနက် ၈ နာရီမှ ထွက်မှာကို တိုးဂိုက်က ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ် အရောက်လာခိုင်းလို့အချိန်တိကျတဲ့ ဝိုင်းက အတိအကျလာ၊ ၁ နာရီ နီးပါးလောက် အတိအကျကို စောင့်လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ တိုးဂိုက်နဲ့စကားစမြည် ပြောဖြစ်တော့ တိုးဂိုက်က အချိန်တိကျတဲ့ကောင်မလေးလို့မှတ်မိနေတာပေါ့။ ကိုယ်တွေ အချိန်တိကျတာ ဆွဇ်တွေကို မမှီဘူးတဲ့။ ဝိုင်း အီတလီမှာနေတုန်းက သူ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဆွစ်က ၁၀ နာရီ ဖုန်းဆက်မယ်လို့ပြောထားရင် ၁၀ နာရီ ၁ မိနစ်မှာ ဖုန်းခေါ်တယ်တဲ့။ ၁၀ နာရီ ၂ မိနစ်မှာမှ ဖုန်းမခေါ်ရင် တခုခုဖြစ်နေပြီတဲ့။ ခုံနံပါတ်တွေ့ တော့ အထုပ်အပိုးတွေ နေရာချ။ အထုပ်အပိုးကလည်း ကျောပိုးအိတ်နဲ့အစားအသောက်အိတ်။ ၁ ညအိပ် ၂ ည ခရီးမို့ကိုယ်မှာဝတ်ထားတဲ့ အင်္ကျီတစ်စုံ၊ ညဝတ်အိပ်တစ်စုံပဲ ပါတာမို့ကျောပိုးအိတ်တွေက ပေါ့ပေါ့လေး။ ကျွန်မက ခရီးသွားရင် ခရီးသွားခေါင်းအုံးလေး ဆောင်တတ်တတယ် ဇက်မနာအောင်လို့ ။ အဲ အစားအသောက်အိတ်ကတော့ အတော်လေးတယ်။
တရုတ်မတစ်ယောက်က သူတို့ စာရွက်ပေါ်က ခုံနံပါတ်ကို ပြတယ် ကျွန်မတို့ ခုံနံပါတ်နဲ့တူနေတယ်။ သူတို့ က လေးယောက်မို့တစ်တန်းတည်း ထိုင်ခုံတွေ။ ဒီမှာကြည့် တိုးဂိုက်ရေးပေးလိုက်တဲ့ ခုံနံပါတ် မင်းတို့ ကားနံပါတ်တွေများ မှားနေသလား။ ဒီကားက ဘတ်စ်နံပါတ်တစ် တုိုးဂိုက်ကို ပြန်မေးကြည့်ဦး။ ဂျူလှိုင်၎ ပိတ်ရက်တုန်းက အက်ကေဒီးယားကို ဘတ်စ်ကား ၇ စီး ထွက်တာမို့ကားနံပါတ်တွေ မှတ်ထားရတယ်။ စာရွက်တွေကို အသေအချာကြည့်ပြီး ကျွန်မတို့ ကို ခုံနံပါတ် မှားပေးလိုက်တာတဲ့။ ဒါနဲ့နောက်ဖက်ကို တခါပြောင်းပြီးတော့ မဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့ နောက်ထပ်တစ်ခါ ပြောင်းရပြန်တယ်။ တိုးဂိုက်က ဆောရီးလို့တောင်းပန်ပေမဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရလို့မျက်နှာလေးတွေအိုအို စိတ်ထဲမှာတော့ တော်တော်ကသမ်းကရမ်းနိုင်၊ မစေ့စပ်မသေချာတဲ့ တိုးဂိုက်လို့ကောင်းချီးပေးကြတာပေါ့။ ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ် ကားမထွက်သေး လူတွေကလည်း စုံသလောက်ရှိနေပြီ ကျွန်မတို့ ရှေ့ က ခုံနှစ်ခုံပဲ လွတ်နေတာ။ မကြာပါဘူး ဒါ ဘာလဲလို့မေးသံကြားလို့ခေါင်းထောင်ကြည့်တော့ မုတ်ဆိတ်မွှေး ပါးသိုင်းမွှေးတွေနဲ့အာရပ်နွယ်ဖွားတစ်ယောက်။
တိုးဂိုက်က ခုံပေါ်မှာတင်နေတဲ့ အနွေးထည်ကို ဖယ်ပေးတော့ ဝင်ထုိုင် ထိုင်ခုံကို နောက်ကိုတအားကြီး လှဲလိုက်တော့ ဝိုင်းနဲ့ ကျွန်မ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ကြပြီး ပြိုင်တူ မေးငေါ့မဲ့ရွဲ့ ကြတယ်။ သူတို့ အတွဲရောက်ပြီးမှ ကားထွက်တာဆိုတော့ သူတို့ စောင့်နေရတာပေါ့။ အင်း ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ခရီးသွားရမှာ မလွယ်ပါလား။ နေ့ လည် ၁၁ နာရီလောက်မှာ မနက်စာစားချိန်လွန် နေ့ လည်စာဖို့ လည်း စောနေသေးတဲ့ brunch စားဖို့ဘာတီမိုးဆိုတဲ့အရပ်မှာ နားပါတယ်။ နေသိပ်မကောင်းချင်တဲ့ ဝိုင်းက သူ့ ဆေးအစာဖြစ်တဲ့ Shives (မြန်မာလို ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိ) ကို ကြက်ဥနဲ့ ကြော်ထားတာကို ထမင်းနဲ့ ကောက်ညှင်းရောထားတဲ့ဆန်နဲ့စားတယ်။ ကျွန်မကတော့ သယ်လာတဲ့ ပြောင်းဖူးပြုတ်၊ ပန်းသီး၊ ဘီစကွတ်တွေနဲ့နေ့ လည်စာ ပြီးတယ်။ ပထမဆုံး သွားလည်မဲ့နေရာက နယူးယောက်ကနေ မြောက်ဖက်စူးစူး မိုင် ၃၀၀၊ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ် မောင်းရတဲ့ Ausable Chasm ။ Andirondack တောင်တဝိုက်က နှစ်သန်းငါးရာ သက်တမ်းရှိတဲ့ သဲကျောက်တွေကို Ausable မြစ် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းပြီး ချန်ပိန်ရေကန်ထဲကို စီးဝင်ရာကနေ အလွန်လှပတဲ့ ကင်ညမ် canyon ဖြစ်လာပါတယ်။
၁၈၇၀ မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာမို့၁၄၄ နှစ် ရှိပါပြီ။ walking ၊ rafting ၊ mountain biking ၊rappelling ၊ rock climbing ၊ camping လုပ်ဖို့သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့ က အလွယ်ဆုံး ၂ မိုင် ထရေးလမ်းကို လျှောက်မှာပါ။ ရေတံခွန်စိမ့်စမ်း၊ သစ်ပင်စိမ်းညှို့ ညှို့ တွေနဲ့ မို့လေက အင်မတန် သန့် ရှင်းတယ်။ လေအသွဲ့ မှာ ထင်းရှူးနံ့ လေးတွေကို ရှူရှိုက်ရသလို သိသိသာသာ အေးစိမ့်လာပါတယ်။ လူတစ်ယောက်စာသာသာ လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေး၊ အောက်မှာ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေတဲ့မြစ်၊ သဲကျောက်တောင်တွေနဲ့ မို့ရှုခင်းက တမျိုးဘာသာ ကွဲပြားနေပါတယ်။ ၂ မိုင် လမ်းလျှောက်တာများ ကိုယ်တို့ က စာမဖွဲ့ ဘူး ပိတ်ရက်တွေမှာ လမ်းလျှောက်အဖွဲ့ တွေနဲ့၎ မုိုင်ကနေ ၇ မိုင်အထိ လမ်းလျှောက်နေကြကိုး။ နောက်ထပ် ၁ နာရီလောက်မောင်းရင် Andirondack တောင်တန်းတွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Whiteface တောင်ခြေကို ရောက်ပါတယ်။ ဝိုက်ဖေ့တောင်ဟာ တခြားတောင်တွေကနေ သီးသန့် ခွဲထွက်နေတာမို့ ဝိုက်ဖေ့တောင်ကနေ အန်ဒီရွန်ဒက်တောင်တွေရဲ့အလှကို ခံစားကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးဗျူးပွိုင့် (outlook) ပါတဲ့။
ဆောင်းရာသီ ski resort အတွက် ပြင်ဆင်နေလို့gondola ဂွန်ဒိုလာလို့ ခေါ်ကြတဲ့ ကောင်းကင်ကေဘယ်လည်း ပိတ်ထားတယ်။ ဝိုက်ဖေ့တောင်နောက်ခံနဲ့ဂွန်ဒိုလာစီးနေတဲ့ပုံ ရိုက်မယ်လို့ကြံစည်ထားတာလည်း အထမမြောက်လိုက်ဘူး။ တောင်ခြေကနေ ဓာတ်ပုံရိုက်တာတောင် မိုးရွာနေလို့အပြေးအလွှား ရိုက်ရတယ်။ နာရီဝက်လောက် ထပ်မောင်းရင် ၁၉၃၂ ကနေ ၁၉၈၀ ထိ အိုလံပစ်အားကစားပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အိုလံပစ်စင်တာရှိတဲ့ လိတ်ပလပ်စစ်မြိူ့ Lake Placid မြို့ဆီ ရောက်ပါတယ်။ ၁ နာရီ ရတဲ့အချိန်တွင်းမှာ ဘယ်ကိုသွားရပါ့ မဲရားလိတ် Mirror Lake ကို ဘယ်လိုသွားရမလဲလို့ဒေသခံလို့ ထင်ရတဲ့ ခွေးနဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့သူတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်တော့ တည့်တည့်သွားတဲ့။ လမ်းတလျှောက် Gift shop ဆိုင်တွေ အများကြီး မိုးကလည်း တဖြောက်ဖြောက်နဲ့မစဲနိုင် ကောင်းကင်ကလည်း မှောင်မဲလို့ ။ ဒါပေမဲ့လည်း Frozen ဒစ်စနေကာတွန်းကားထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်း Let it go သီချင်းထဲက Cold doesn't bother me anymore သီချင်းစာသားလေးကို ကျွန်မတို့ က Rain doesn't bother me anymore လို့ဟစ်ကြွေးပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်မပျက်။
အဲ မိုးရေကြောင့် ဆံပင်တွေ စုိုကပ်ပြီး ကြွက်စုတ်ဖြစ်နေတော့ မျက်နှာအနီးကပ်တော့ မရိုက်ကြဘူး။ ဝေးနိုင်သမျှဝေး ဘက်ကရောင်းပုံတွေပဲ ရိုက်ကြတယ်။ Lake Placid ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကိုတွေ့ တော့ နီးသလားလို့ဂူဂယ်မက်မှာ ရှာကြည့်တာ လား...လား မြေပုံထဲမှာတော့ နီးတယ် ကားမောင်းရင် ၁၀ မိနစ်လောက်ပဲ ကိုယ်တွေက လမ်းလျှောက်ရမှာ နာရီဝက်လောက်။ လည်ပတ်ဖို့ပေးထားတဲ့ ၁ နာရီမှာ နာရီဝက်လောက်ပဲ အချိန်ရတော့တယ်။ သေချာအောင် ဒေသခံတွေက မေးကြည့်မှပဲဆိုပြီး ဘားထဲက ထွက်လာတဲ့ အန်ကယ်ကြီးကို မေးကြည့်တော့ အဲဒီဖက်မှာ ဟိုတယ်ကလွဲရင် ဘာမှမရှိတော့ဘူး ဆိုင်တွေက ဟိုဖက်တလျှောက်မှာ။ ဒီမှာ ၁ နာရီလောက်ရလို့ဘယ်နေရာတွေများ သွားလည်ဖို့ရီကွန်မန်းပေးချင်ပါသလဲဆိုတော့ အိုလံပစ်စင်တာကို သွားတဲ့။ အဲဒီလမ်းအတိုင်းလျှောက် အဆုံးမှာ အိုလံပစ်စင်တာတွေ့ လိမ့်မယ်။ အဆောက်အဦး ခပ်ကြီးကြီးကို တွေ့ လို့ ကတော့ အိုလံပစ်စင်တာလို့ တာ မှတ်လိုက်တော့ မလွဲစေရဘူး။ ၁၉၈၀ သမိုင်းဝင် Miracle on Ice ဟော်ကီဂိမ်းကို အဲဒီစင်တာမှာ ကျင်းပခဲ့ပြီး အမေရိကန်ဟော်ကီအသင်းက ရုရှားဟော်ကီအသင်းကို အနိုင်ရဗိုလ်စွဲခဲ့တာကို အမေရိကန်တွေ သိပ်ဂုဏ်ယူတယ်။
စင်တာရောက်တော့ ဟော်ကီပွဲ ကျင်းပနေတာနဲ့ တူတယ် ဝင်ကြေး ၆၅ ကျပ်တဲ့။ ပြတို်က်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ မတွေ့ ခဲ့ဘူး။ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ကားဆီပြန်တော့ အချိန်တိကျတဲ့သူတွေ ရောက်နေကြပြီ။ ဘေးနားက ဆိုင်တဆိုင်က ကြယ်ပုံမီးပုံးတွေ အလှဆင်ထားတာ လှလို့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်။ ဆိုင်ထဲဝင်ကြည့်တော့ ခရေစတယ်ရောင်စုံ၊ ကျောက်အမျိုးမျိုးတွေ ရောင်းတဲ့ဆိုင်။ ကြယ်မီးပုံးတွေက လှလိုက်တာ ခရစ်စမတ်ချိန် ရောက်ပြီလို့ခံစားရတယ်လို့ဆိုင်ရှင်ကို ပြောကြသေးတယ်။ နောက်ထပ် ၁ နာရီ ထပ်မောင်းရင် ချန်ပိန်ရေကန်ဘေးနားမှာ တည်ရှိတဲ့ Plattsburgh မြို့ ကို ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီမြို့ မှာ ညအိပ်ရမှာပါ။ ဟိုတယ်ဆီ မမောင်းခင် Hong Kong Jude ဘူဖေးဆိုင်မှာ ညစာစားတယ်။ တယောက်ကို ၁၄ ကျပ် တက်စ် tax ၊ တစ်ဖ် tip ပါအပြီး ၁၆ ကျပ် ကျပါတယ်။ ဗို်က်ဆာနေလို့ ပဲလား၊ အစားအသောက်တွေက ကောင်းလို့ ပဲလားမသိ အတော်စားကောင်းတယ်။ ဂဏ္ဏန်းလက်မတွေဆို လတ်ဆပ်လို့နောက်ထပ်တစ်ပွဲ ထပ်စားရတယ်။ အမေရိကန်တွေ တော်တော်များများ လာစားကြတယ်။ နေရာချပေးတဲ့ ဝိတ်တာဆိုရင် ဝေါ်ကီတော်ကီ Head phone နဲ့ ။
ကင်မရာကို ခုံပေါ်တင်ပြီး ခေါင်းမဖေါ်တမ်း တီးနေတဲ့ ကျွန်မကို အဲဒီဝိတ်တာလေးက တရုတ်လို ကွိကွလာပြောတယ်။ ခုံကို တစ်ယောက်ယောက်က တိုက်မိရင် ကင်မရာကျကွဲလိမ့်မယ်လို့အင်တာနေရှင်နယ်ဘာသာစကား (လက်ဟန်ခြေဟန်) နဲ့ ပြောတာမို့ကျွန်မ နားလည်လိုက်တယ်။ ဝိုင်းက ကျွန်မ တရုတ်စာ ကောင်းကောင်းတတ်တယ်လို့ထင်သွားတယ်။ အမှန်က နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာ မနက်ပိုင်းသင်တန်း တစ်နှစ်ခွဲတက်ဖူးလို့ကျွန်မက တရုတ်စာ နည်းနည်းလေးပဲ သိတယ်။ ဗီယက်နမ်မှာ တက္ကသိုလ်တက်တုန်းက နိုင်ငံခြားဘာသာ မယူမနေရဆိုတော့ ပြင်သစ်ဘာသာယူပြီး လေးနှစ်သင်၊ ပါရီမှာ ကျောင်းတစ်နှစ်နေဖူးတဲ့ ဝိုင်းက ပြင်သစ်စကား ကောင်းကောင်းပြောတတ် ရေးတတ်တယ်။ ကနေဒါပြည်ပေါက် ဘယ်လ်ဂျီယမ်သူငယ်ချင်းနဲ့ ဆို ပြင်သစ်လိုပဲ ပြောကြတာတဲ့။ ပြင်သစ်ဝထ္ထုတွေကို ပြင်သစ်လို ဖတ်တယ်။
ကနေဒါနုိုင်ငံ ကွိဘတ်ပြည်နယ် Quebec (ဝိုင်းက ပြင်သစ်စကားနဲ့ကေ့ဘတ်လို့အသံထွက်တယ်) မွန်ထရီရယ် Montreal မြို့ ကနေ ၁ နာရီလောက်ပဲ မောင်းရတာမို့ကနေဒီးယန်းတွေ ဒီကိုလာပြီး လျှော့ပင်းကြပါသတဲ့။ ဘူဖေးဆိုင် ဘေးနားကဆိုင်ကို လျှော့ပင်းကြတော့ အတော်သက်သာတာ တွေ့ ရတယ်။ Head & Shoulders Shampoo ဆို နယူးယောက်မှာ ၇ ၊ ၈ ကျပ် ပေးရတာကို ဒီမှာ ၂ ၊ ၃ ကျပ် လောက်ပဲ ပေးရတယ်။ တန်လို့ဝယ်ချင်ပေမဲ့ ကျွန်မသုံးတဲ့ တံဆိပ်တွေ မရှိဘူး။ ညအိပ်တဲ့ ဟိုတယ်က American Best Inn မဆိုးပါဘူး။ ဆံပင်မိုးစိုတဲ့ ဝိုင်းက ခေါင်းလျှော်ပါမှ သူ နေမကောင်းမဖြစ်မှာတဲ့။ အနွေးထည်မှာ ခေါင်းစွပ်ပါတဲ့ ကျွန်မက မိုးရွာရင် ခေါင်းစွပ်လေး ခြုံရုံပဲ။ အေးလို့ ၈၀ အပူပေးထားတာ ညသန်းခေါင်ရောက်ရော ချွှေးတွေထွက်လာလို့အအေးပြန်လျှော့ စောင်လေးခြုံပြီး ကွေးလိုက်ကြတာ မနက် ၇ နာရီခွဲ Morning Call ခေါ်ပြီး နိုးတော့မှပဲ နိုးတော့တယ်။ ချန်ပိန်ရေကန်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ဗာမွန်ပြည်နယ်က လည်ပတ်စရာတွေကို အပိုင်း ၂ ကျမှ ဆက်ပါဦးမယ်။